Atomos Timecode စနစ်များကိုရယူခြင်းသည်ပိုမိုထိရောက်သည့် Multicamera Content Creating ကိုဆိုလိုသည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » အသားပေး » Atomos Timecode စနစ်များကိုရယူခြင်းသည်ပိုမိုထိရောက်သည့် Multicamera Content Creation ကိုဆိုလိုသည်
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ software နှင့်ဟာ့ဒ်ဝဲနည်းပညာကုမ္ပဏီအဖြစ်, Atomos နည်းပညာစျေးကွက်အတွက်အဆိုးရွားဆုံးသောအကြောင်းအရာဖန်တီးမှုထုတ်ကုန်အချို့ကိုတီထွင်ထုတ်လုပ်၊ ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်စီးပွားဖြစ်ပြုလုပ်ခြင်းသည်အဆအဆက်မပြတ်ကြီးထွားမှုကိုဆက်လက်ခံစားရသည်။ ကုမ္ပဏီ၏ထုတ်ကုန်များသည်လူမှုရေး၊ ဗီဒီယိုနှင့်ဖျော်ဖြေရေးစျေးကွက်များသို့လျင်မြန်စွာတိုးတက်လာခြင်း၊ အရည်အသွေးမြင့်မားခြင်းနှင့်ပိုမိုတတ်နိုင်သောထုတ်လုပ်မှုစနစ်များတွင်အကြောင်းအရာဖန်တီးသူများကိုခွင့်ပြုသည်။
Atomos 2010 တွင်ကမ္ဘာ့ပထမ ဦး ဆုံးဗီဒီယိုမော်နီတာနှင့်အသံဖမ်းစက်ကိုတည်ထောင်သည့်အချိန်တွင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ယခုကင်မရာပါဝင်မှုဖန်တီးမှုသည်လျင်မြန်စွာကြီးထွားလာခြင်းနှင့်အတူခေတ်သစ်တစ်ခုစတင်နေပြီဖြစ်သည် Atomos ကုမ္ပဏီမည်သို့ဝယ်ယူခဲ့သည်ကိုဖုံးကွယ်လတ်တလောကြေညာချက်ထဲမှာ Timecode စနစ်များ.
Timecode စနစ်များ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးကြိုးမဲ့ timecode နှင့်ထပ်တူပြုခြင်းကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။ ယခုသူတို့သည်တီထွင်ဆန်းသစ်သောတီထွင်ကြံဆမှုနှင့်ပေါင်းစပ်လိုက်ပြီဖြစ်သည် Atomosကုမ္ပဏီနှစ်ခုစလုံးသည်တင်းကျပ်စွာပေါင်းစည်းထားသည့် multicamera workflow ဖြေရှင်းချက်များကိုတည်ဆောက်နိုင်ပြီး set ပေါ်တွင်မှတ်တမ်းတင်ထားသော devices များအားလုံးကိုပေါင်းစည်းစေလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်၎င်းတို့အားပိုမိုစည်းလုံးသောနည်းဖြင့်အတူတကွအလုပ်လုပ်စေလိမ့်မည်။
အကြီးမားဆုံးရုပ်ရှင်နှင့်ရုပ်မြင်သံကြားထုတ်လုပ်မှုနှင့်ပတ်သက်လာလျှင် Timecode Systems ၏ယုံကြည်မှုသည် ကြိုးမဲ့ထပ်တူပြုခြင်းယူနစ် နှင့် ထိန်းချုပ်မှု module တွေ ပြီးသားနေရာတိုင်းမှာရှိပါတယ်။ Timecode Systems ၏ wireless sync unit နှင့် control module များအသုံးပြုခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောထုတ်လုပ်မှုများတွင် -
အဆိုပါအံ့ films ခြင်းရုပ်ရှင်
ဘာ Atomos Multicamera အတွေ့အကြုံအတွက် Timecode Systems ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုဆိုလိုသည်
အဆိုပါ Timecode စနစ်များနည်းပညာ ယခုအတွက် feature ပါလိမ့်မယ် Atomos ထုတ်ကုန်အကွာအဝေး ၎င်းကိုတတိယပါတီကင်မရာများ၊ စမတ်စက်များနှင့်အသံထုတ်လုပ်သူများအတွက်အခမဲ့ SDK အဖြစ်ကမ်းလှမ်းလိမ့်မည်။ ဒီပူးပေါင်းမှုကပရော်ဖက်ရှင်နယ်သို့မဟုတ်ရုပ်ရှင်ရုံကင်မရာများကိုအသုံးပြုသူများအတွက် multicamera ရိုက်ချက်များနှင့် audio synchronization ကိုပိုမိုလွယ်ကူစေပြီးပိုမိုထိရောက်စေသည်။
Timecode Systems ၏တိကျမှုနောက်ကွယ်ရှိဆန်းသစ်တီထွင်မှုနှင့်ပတ်သက်လာလျှင်၎င်းတို့၏ဗဟိုစံနှုန်းများအနက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ထူးခြားသော RF ကြိုးမဲ့စနစ်ဖြင့်ကင်မရာများနှင့်အသံထုတ်လွှင့်မှုများသည်သမားရိုးကျဝါယာကြိုးများကိုအစားထိုးသည် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း.
Multi- ကင်မရာရိုက်ချက်များအတွက်ဝယ်လိုအားမြင့်တက်နေသော်လည်းဖန်တီးသူများသည်ဗွီဒီယိုနှင့်အသံအရင်းအမြစ်အမျိုးမျိုးကိုပေါင်းစပ်ထားသောဗွီဒီယိုများကိုတည်းဖြတ်ရန်၊ ညှိရန်နှင့်ပြီးအောင်လုပ်ရန်အချိန်နှင့်အကန့်အသတ်ရှိနေသည်။ ၏ပေါင်းစပ် Atomos နှင့် Timecode Systems မှအသုံးပြုသူများကိုစျေးသက်သာပြီးသက်တောင့်သက်သာရှိသည့် multi-camera workflows များကိုခွင့်ပြုလိမ့်မည်။ ၎င်းတို့သည်စက်မှုစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီလိုက်နာနေဆဲဖြစ်သောတိုးမြှင့် metadata များဖြင့်မှတ်တမ်းတင်ရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။ အသစ်ပေါင်းစည်းစနစ် Atomos နှင့် Timecode စနစ်များသည်ပစ္စည်းမျိုးစုံနှင့်ချောမွေ့စွာအလုပ်လုပ်နိုင်သည်။ ဒီဟာကအရေးကြီးတဲ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့မလိုအပ်တဲ့နာရီတွေကိုဖယ်ရှားပေးတဲ့အတွက်လိုအပ်တဲ့အချိန်နဲ့ငွေကိုချွေတာနိုင်တဲ့မျိုချခြင်း၊ ဗွီဒီယိုနဲ့အသံတည်းဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်ဖြစ်တယ်။
အချိန်ဖန်တီးမှုသည်အကြောင်းအရာဖန်တီးမှုဖြစ်စဉ်ကိုတိုးမြှင့်ရာတွင်အဓိကအစိတ်အပိုင်းဖြစ်လိမ့်မည်။ ဤအချက်ကို ထပ်မံ၍ ထောက်ခံခဲ့သည် Atomos စီအီးအိုနှင့်တည်ထောင်သူ, ဂျရုမ်းလူငယ်သူကဖော်ပြခဲ့သည် “ ဗီဒီယို ၀ ယ်လိုအားကအရင်ကထက်ပိုများပြီးလူတွေကဖန်တီးမှုအတွက်သီးခြားထုတ်ကုန်တွေပိုသုံးလာကြတယ်။ သို့သော်အကြောင်းအရာဖန်တီးသူများအနေဖြင့်ဗီဒီယိုနှင့်အသံအရင်းအမြစ်အမြောက်အများကိုပေါင်းစပ်ထားသည့်ဗီဒီယိုများတည်းဖြတ်ရန်၊ ညှိရန်နှင့်ပြီးအောင်လုပ်ရန်အချိန်အထူးသဖြင့် prosumer နှင့်စားသုံးသူကိရိယာများကိုသုံးသောအခါကင်မရာများနှင့်အတူရုပ်ရှင်ရိုက်ရန်။ အခုဒီဆက်သွယ်မှုပြတ်တောက်မှုဟာကင်မရာဗွီဒီယိုအကြောင်းအရာဖန်တီးမှုကိုတားဆီးနေတယ်။ ”
Young ကနောက်ထပ်ရန် "ကြောင်းအသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည် အမှန်တကယ်အတူတကွရိုက်ကူးခြင်း၊ အရာအားလုံးသည်ပြီးပြည့်စုံသော၊ တိကျသောစည်းညှိညှိနှိုင်းမှုတွင်အလုပ်လုပ်ရန်လိုအပ်သည် - ဤအားကောင်းသောကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်မှုရှိရမည် Timecode Systems RF protocol သည်ဤကျည်ဆံကာကွယ်နိုင်သော link ဖြစ်သည်။ Timecode စနစ်စံချိန်စံညွှန်းနှင့်အညီကျွန်ုပ်တို့တွင်အမှန်တကယ်ချိတ်ဆက်ထားသော multicamera ဖြေရှင်းချက်ကိုဖန်တီးရန်ကော်ရှိနေပြီဖြစ်သည်။ ”
၏ပူးပေါင်းအတူ Atomos နှင့် Timecode စနစ်များတွင်ကင်မရာထုတ်လုပ်မှုသည်ဒီမိုကရေစီကိုအပြည့်အဝရရှိလိမ့်မည်။ ဒီနယ်ပယ်သို့ရောက်ရှိနိုင်သည့်ဥပမာများစွာမှာ -
As Atomos Timecode စနစ်များသည်အတူတကွပူးပေါင်းကြသည်။ လက်ရှိဖောက်သည်များသည်၎င်းတို့၏လက်ရှိစနစ်များနှင့်ပိုက်လိုင်းအတွင်းရှိစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောတိုးတက်မှုအသစ်များမှ ပို၍ တန်ဖိုးကြီးမားစွာရရှိရန်မျှော်လင့်နိုင်သည်။ Timecode Systems CTO နှင့်ပူးတွဲတည်ထောင်သူဖြစ်သည့်အခါ၎င်းသည်ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ရှင်းလင်းနိုင်ခြင်းမရှိကြောင်း Paul Bannister ကပြောကြားခဲ့သည် "ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကအမြဲတမ်းအရွယ်အစားရှိတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုဖန်တီးရန်ဖြစ်ပြီးရိုက်ကူးမှုပတ် ၀ န်းကျင်အမျိုးမျိုးမှာအလုပ်လုပ်နိုင်အောင်ပေါင်းစပ်ထားတယ်။ Atomos ဒီကတိကဝတ်ကိုမျှဝေ အခုတော့ကုမ္ပဏီနှစ်ခုစလုံးမှယနေ့အထိဖန်တီးထားသည့်အရာအားလုံးကိုအတူတကွယူပြီးနောက်ထပ်ထပ်မံတွန်းပို့နိုင်သည်။
အသေးစိတ်အချက်အလက်ကို Atomos နှင့် Timecode Sytems, ထို့နောက် www ထွက်စစ်ဆေးပါ။atomos.com နှင့် www.timecodesystems.com/.
Aurora ကနျြးမာရေးကင်ပိန်း / ကိုလိုနီထောက်ခံ atomos ထုတ်လွှင့်-လူမှုမီဒီယာ ထုတ်လွှင့်-SocialMedia ထုတ်လွှင့်-SocialMeida တည်းဖြတ်ခြင်း FOR-တစ်ဦးက ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor ဂျယ်ရမီလူငယ် Multicamer RF SJGolden - လှံ & Arrows ကိုလိုနီခေတ် ကိုလိုနီခေတ် - သတင်း ကိုလိုနီ / ချီကာဂို Timecod စနစ်များ တီဗီနည်းပညာ TVU ကွန်ယက် မူကွဲစနစ်များ ကြိုးမဲ့ထပ်တူပြုခြင်းယူနစ် 2019-10-26
ယခင်: Energy Corps - ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသောပညာရေး
နောက်တစ်ခု: စတူဒီယို & Record တံဆိပ်အတွက် Podcast ထုတ်လုပ်မှုသင်တန်း